झर्रोटर्रो : ‘भूत’ – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
झर्रोटर्रो : ‘भूत’
प्रकाशित मिति : २०७३ पुस १४
यतिखेर नेपाल मण्डलमा एउटा ‘भूत’ सवार भएको छ । देश देशाटन घुमेर आए लगत्तै कागतको चिर्कटोमा केही टुनामुना लेखेर बाहिर फाल्न के भ्याएको थियो, एकाथरी मनुवा थर्कमान भए । विशेष गरेर त्यो ‘भूत’ले सरकार, सरकारी दलका लाउकेहरू र विगतमा सरकार चलाएर डकारेका दल र तिनका मुखियाहरूलाई नराम्ररी थर्काएको छ । उनीहरूको ज्यानमा २०७२ बैसाख १२ को महाभूकम्प भन्दा पनि बढ्ता भूकम्प गएर लुगलुग काँपिरहेका छन् ।
यसरी ‘भूत’ले आतङ्क मच्चाएको खबर झर्रोटर्रो पत्रिकासम्म आएपछि म अर्थात् कैलुब्राह सत्यतथ्य रिपोर्टिङ गर्न भन्दै कान्तिपुरी नगरीमा निश्किएँ । शाषकदरबार, शाही‘भूत’ बस्ने गरेको ‘भूत’दरबार हुँदै सरकारवादी दलहरूका दरबारसम्म जताततै मण्डल मार्दै म नागार्जुनको जङ्गलतिर जाँदै थिएँ अचानक दारेमष्टसँग मेरो जम्काभेट भयो । त्यसपछि म र दारेमष्ट कान्तिपुरी नगरीको एउटा रेष्टुराँमा बसेर बात मा¥यौँ । समाचार सङ्कलन गर्न निस्किएको मलाई दारेमष्टले उल्टै बिभिन्न प्रश्नहरू सोधेर अन्तरवार्ता पो लियो त । प्रस्तुत छ दमारेमष्ट र मेरा बिचमा भएको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश ।
उसले सोध्यो : कैलुब्राह ज्यू लौ भन्नुस् त शाही‘भूत’सँग यी सरकारी मनुवा किन थुरथुर भएर काँपिरहेका छन् ?
मैले भने : हेर मस्ट भाइ, आत्मबल कमजोर भएका मनुवाहरूलाई ‘भूतप्रेत’, ‘बोक्सीकाक्सी’, ‘मैमसान’ र ‘दैदेउतामा’ विश्वास हुन्छ । यी मनुवाहरूको आत्मबल कमजोर छ । मुटु सानो छ । दिमाग पनि आफ्नो छैन । अरूले सिकाएको बुद्धिले काम गर्छन् । यिनीहरूका खुट्टा पनि कमजोर छन् । बैसाखी टेकेर हिँडेका छन् । त्यसैले थुरथुर काँपेका हुन् ।
उसले सोध्यो : हैन सरकारले त झन् कट्टुमै तुक्र्याएर बैठकमै ‘भूत’ले जारी गरेको वक्तव्यको चिर्कटाबारे छलफल गरे त किन होला ?
मैले भने : यो सरकार पनि दलालहरूको सरकार हो, आफू भन्दा झन् ठूलो दलालले आफूहरूलाई हुत्याउँछ कि भनेर कट्टुमा तुक्र्याएका होलान् ।
उसले सोध्यो : ‘भूत’ कसरी दलाल भयो त ?
मैले भने : देखेनौ मस्ट भाइ, भारत, हङकङ, सिङ्गापुर हुँदै चाइना घुमेर प्रभुहरूलाई भेटेर आएको । दलाल नभा’भे त्यसरी देशाटन चाहार्दै समर्थन जुटाउन हिँड्न पथ्र्यो त ?
उसले सोध्यो : गुज्जर भैयाले त ‘भूत’लाई वर्तमान बनाउन कस्सेर लाग्या छन् रे त ? पञ्चप्रेतहरूको पार्टीलाई पनि उनैले मिलाइद्या हुन् रे । ‘भूत’लाई साथ दिनू भन्या छन् रे ?
मैले भने : हो हो । तिमीले ठिकै बुझेका रैछौ भाइ । सबै उतैका दलाल हुन् क्या । कोही भित्री दलाल कोही बाहिरी दलाल । कोही साना दलाल कोही ठूला दलाल । सबै भूत र पे्रत दलालहरूलाई मिलाएर पुरानो शाही ‘भूत’को सत्ता फर्काउने रे क्या ।
उसले सोध्यो : मन्त्रीहरूको बैठकमा त पुलिसमन्त्रीले शाही दरबारको फाइल खोजेर ज्यानमारामा कोच्न पर्छ ‘भूत’ लाई भनेर ठोके छन् नि ?
मैले भनेँ : ‘पोहर मरिन सासू ऐले आए आँशु’ भनेको त्यही हो । आफ्ना हजुरबाउको सरकारलाई सत्र सालमा ठेंडुकोमा कोचेझैँ ‘भूत’ ब्युँतेला र फेरि आफूहरूलाई पनि कोच्ला भनेर झस्केका होलान् । त्यै भएर ‘भूत’लाई थर्काएका होलान् चुप लाग भनेर ।
उसले सोध्यो : नयाँशक्तिका डाक्साबले त ‘भूत’लाई बाह्यशक्ति धाउँदै हिँड्नेले राष्ट्रियताको कुरा गर्ने भन्दै दुखेसो पोखेछन् । ‘भूत’ले पश्चगमन फर्काउन खोजेकाले सबै सतर्क रहन आह्वान गरेछन्, किन होला ?
मैले भने : ‘भूत’ ले पनि आफ्नै बाटो पछ्यायो भनेर डाहा गरेका होलान् । प्रभुको निर्देशनमा छँदाखाँदाको संविधानसभा विघटन गर्ने मान्छेले अर्कालाई दोस लगाउनुको के तुक रह्यो र ।
उसले सोध्यो : रोल्पाली बाबुसापको माउवादीले पनि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता नमान्ने रे नि ? किन होला ?
मैले भने : पञ्चप्रेतहरूको पार्टी, ‘भूत’ र बाबुसापहरूलाई बाह्यशक्तिले घालमेल पारेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेल खेल्न थाल्याछ भन्ने सुन्छु म त । गुज्जर भैयाको डिजाइनमा होला क्या । सबै कुरा मलाई नै किन सोध्छौ दारेमस्ट भाइ ? सबै कुरा मलाई के थाहा ? तिमीलाई पनि ‘भूत’ले तर्साए जस्तो छ । अब छुट्टिम फेरि अर्को हप्ता भेटौँला ।
शनिबारका दिन नेकपा साठी–चालीसका देशी संसदका दुबै...
२०७४–चुनाव, Sahitya, फ्लयास ब्याक ... , Read More